Maamulka Jubbaland oo ka hadashay Nabadoon xalay lagu dilay magaalada Kismaayo - Awdinle Online
Maamulka Jubbaland oo ka hadashay Nabadoon xalay lagu dilay magaalada Kismaayo
October, 21, 2019 (AO) – Maamul gobolleedka Jubbaland ayaa sheegay in ay wadaan baaritaanno ku aadan kooxihii ka danbeeyay dil xalay magaalada Kismaayo loogu geystay Nabadoon lagu magacaabi jiray Xaaji Saciid Ciise Cabdi.
Afhayeenka Amniga Jubbaland Cabdinuur Ibraahim Xuseen oo warbaahinta la hadlayay ayaa sheegay in Nabadoonka la dilay xili uu xalay ka soo masjid uu ku soo tukaday Salaadii cisha, isaga oo ku tilmaamay Nabadoonka in uu ahaa shaqsi samafale ahaa, kana shaqeeyn jiray arrimaha bulshada.
Ilaa iyo hadda ma jirto cid loo soo qabtay dilka Nabadoon, hasse ahaateen afhayeenka laamaha Amniga Jubbaland ayaa sheegay in ay qaadi doonaan tallaabo deg deg ah oo ka dhan ah kooxihii dilkan ka danbeeyay.
Kismaayo ayaa inta badan waxaa ka dhaca dilalka lagula kaco Nabaddoonnada iyo Waxgaradka ku dhaqan magaalada kuwaa oo qaarkood la sheego in ay salka ku hayaan dilalkooda arrimo siyaasadeed.
Dhinaca kale,isla xalay rag hubeysan aya degmada Afgooye toogasho ku dilay nabadoon lagu magacaabi jiray Ibraahim Maxamed Ibraahim.
Previous articleWar deg deg ah: Nabadoon Goordhow Lagu Dilay Magaalada Kismaayo
Next articleMaamulka Mandheera oo dalbaday in lagu daro wadahadalada Soomaaliya iyo Kenya